( - _ ashin da daw dhamma i in la ma na o pa s sa sayardaw shin ta tha u ya yar za ဆရာတော် ၏ 12View More
- A - Aung Lan Sayardaw - အောင်လံ ဆရာတော် ဦးစန္ဒိမာ
- A - Aung Zabu Tawya အောင်ဇမ္ဗူတောရ ဓမ္မရိပ်သာ - ရှေးဟောင်းဘုရားများ
-- M - Mar Mar Aye - မာမာအေး
- D-Dhamma Gone Yae U Aww Bar Tha ဓမ္မဂုဏ်ရည်တောရရိပ်သာဆရာတော် - ဦးသြဘာသ
- K -Ashin Kawvida မဇ္ဈိမဂုဏ်ရည် ဒေါက်တာ အရှင်ကောဝိဒ
- K- Kotseik Kosit
- M - Maharsi sayardaw - U Thawbhana - မဟာစည်ဆရာတော် ဦးသောဘန
- P - Ashin Ponnya Nanda ဆရာတော် အရှင်ပုညာနန္ဒ
-- B -Bokyaung - မဟာဓမ္မိကာရာမတိုက်၊ နံ့သာမြိုင် ဗိုလ်ကျောင်း၊
- S - Shwe Min Wun Yeik Tar ရွှေမင်းဝံရိပ်သာ ဆရာတော်( မဟာစည်)
- S - Shwe Oo Min ရွှေဥမင်တောရရိပ်သာ
- T - Tatdhammaransi Yeiktar သဒ္ဓမ္မရံသီရိပ်သာဆရာတော်
- T - Tuta sonelin buddha win သုတစုံလင်‌ ဗုဒ္ဓဝင်‌ပြိုင်‌ပွဲ
- T- Thitsarparami Sayadaw သစ္စာပါရမီ ဆရာတော် ဒေါက်တာအရှင်ဇေယျတိဿ
- T- Titsar Shwe Si Sayadaw သစ္စာရွှေစည် ဆရာတော်
-- T - Test infinity
- Y - Yawainewy ရဝေနွယ်( အင်းမ)
- Z - U Zawtika( Pyinmana) ပျဉ်းမနား၊ မဟာမြိုင်တောရဆရာတော် ဦးဇောတိက
M - Mya Sein Taung Sayadaw (မြစိမ်းတောင် ဆရာတော်)
M - Myay Zin Maung Daung Myay Zin (MyayZin) မောင်းထောင်မြေဇင်း
Books - ဓမ္မရေးရာစာအုပ်များ / P - PaYateKyi - PaYateKyee - ပရိတ်ကြီး ပရိတ်ကြီး...
ပရိတ်ကြီး ၁၁ သုတ် အသံထွက်နည်း
Tags: ပရိတ်ကြီး ၁၁ သုတ် အသံထွက်နည်း Books - ဓမ္မရေးရာစာအုပ်များ / Z - Ashin Zanakarbiwuntha - အရှင်ဇနကာဘိဝံသ ပရိတ်ကြီး...
Tags: မဟာဂန္ဓာရုံဆရာတော် အရှင်ဇနကာဘိဝံသ _ ashinzanakaviwontha ashin janakabhivamsa mahargadayone sayartaw sayardaw Books - ဓမ္မရေးရာစာအုပ်များ / T - TharThaNaParLa - သာသနာ့ပါလအဖွဲ့ ပါရမီ...
ပါရမီ ပရိတ်ကြီး၁၁သုတ် ပါဠိတော်၊ အသံထွက်၊ မြန်မာပြန်၊အမွှန်းနှင့် သိမှတ်ဖွယ်ရာများ
Tags: သာသနာ့ပါလအဖွဲ့, ပရိတ်ကြီး၁၁သုတ် Books - ဓမ္မရေးရာစာအုပ်များ / T - ThaPyayKan Sayardaw - သပြေကန်ဆရာတော် အရှင်ဝါသေဋ္ဌာဘိဝံသ ပရိတ်ကြီး...
ပရိတ်ကြီး နိဿယသစ် (သပြေကန် ဆရာတော်)
Tags: ပရိတ်ကြီး နိဿယသစ် (သပြေကန်မူ) tha pyay kan thapyakan payatekyee payatkyi သပြေကန် ဆရာတော် pa yate kyi pa yate kyee D - Dhamma Songs - Dhammapuzar - ဓမ္မပူဇာတေးများ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] မေတ္တသုတ်ပ...
http://www.mm-flashsongs.com/ မှ ကျေးဇူးပြုပါသည်။
Tags: မေတ္တသုတ်ပရိတ်မြန်မာလို ရွတ်ဖတ်ပူဇော်နည်း မေတ္တာသုတ် ပရိတ်ကြီး ပရိတ် metthathote myittarthote metta thote myit tar thote payatekyee pa yate kyee Books - ဓမ္မရေးရာစာအုပ်များ / A - Abhidhamma - အဘိဓမ္မာ ငရံ့မင်း...
Tags: ငရံ့မင်း ပရိတ် ပါဠိတော် ငရံ့မင်းပရိတ် ပါဠိ ngayantminpayate nga yant min pa yate parli par li Books - ဓမ္မရေးရာစာအုပ်များ / P - PhayarShidKhoe - ဘုရားရှိခိုးအမျိုးမျိုး ဓာရဏပရိတ်...
Tags: ဓာရဏပရိတ်မြန်မာပြန် ဓာရဏပရိတ် မြန်မာပြန် ဓာရဏ ပရိတ် daryanapayate dardanapayate dar ya na pa yate dar da na pa yate payate translate to myanmar myanmarpyan Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] / K - ကြာနီကန်ဆရာတော် - Kyar Ni Kan Sayardaw ပဋ္ဌာန်း ၊...
ပဋ္ဌာန်း ၊ အောင်ခြင်းရှစ်ပါး ၊ ဓာရဏပရိတ် - ကြာနီကန်ဆရာတော်
Tags: ပဋ္ဌာန်း ၊ အောင်ခြင်းရှစ်ပါး ၊ ဓာရဏပရိတ် - ကြာနီကန်ဆရာတော် pa htan darrana daryana dar ya na dar ra na payate pa yate kyar ne kan kyarnikan sayardaw Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] / D-Dhamma Gone Yae U Aww Bar Tha ဓမ္မဂုဏ်ရည်တောရရိပ်သာဆရာတော် - ဦးသြဘာသ အစွမ်းထက်...
Posted By: dhammainfinity
ဓမ္မဂုဏ်ရည်တောရ ဆရာတော်၏ အစွမ်းထက်ပရိတ်တရားတော်များ
Tags: ဦးသြဘာသ uawwbatha uawbatha uawbartha www.infinitydhamma.com Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] / T - Tatdhammaransi Yeiktar သဒ္ဓမ္မရံသီရိပ်သာဆရာတော် ပဌာန်းနှင...
ပဌာန်းနှင့် ပရိတ် တရားတော်များ သဒ္ဓမ္မရံသီဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တကုဏ္ဍလာဘိဝံသ The late Saddhama Ranthi Sayadaw gyi Ashin Kundala Bhivamsa ()